Oovimba be-Fed Reserve-Funda ukurhweba
tag: Indawo yeFed
IVeki engaphambili: IYurophu yaseCoronavirus njengoko iMarike ilindele ukukhutshwa kweFed
Ukuhlaziywa: 21 Matshi 2021
Amazwe e-EU ajongene nenani elikhulayo lamatyala amatsha, kunye nokutshixwa kutsha kunye nezithintelo. Umahluko osasazekayo ngokukhawuleza ubonakala ukodlula ukungeniswa kwesitofu sokugonya. I-Northern France ne-Paris zivaliwe inyanga. I-Itali inyanzelise ixesha lokubuya ebusuku. Ummandla ngamnye unikezelwe umbala wendawo: obomvu, i-orange kunye nomhlophe, kuxhomekeke kwinqanaba lesifo. Yonke imimandla ngaphandle kwe-1 isendaweni ebomvu okanye eorenji. E-Jamani, izithintelo kulindeleke ukuba ziphele ngo-Matshi 22. Nangona kunjalo, ngoMvulo, uMerkel udibana nentloko yelizwe ukumisela ukuba ukuvalwa kwemiqobo kungandiswa.
Ithemba lokuba izithintelo ziya kususwa liyadanisa, ngokutsho komphathiswa wezempilo waseJamani. Izitofu zokugonya zisandula ukunqandwa kumazwe amaninzi aseYurophu kuba iyeza lokugonya i-AstraZeneca bekucingelwa ukuba linokubangela amahlwili egazi. Nangona kunjalo, ngolwe-Lwesine, i-Arhente yamaYeza yaseYurophu (i-EMA) ithe iyeza lokugonya "likhuselekile kwaye liyasebenza," kwaye amazwe amaninzi aqale ukuwasasaza kwakhona.
Uninzi lwamatyala amatsha ngoku asasaza ngokukhawuleza okwahluka okunje ngeB.1.1.7 (UK eyahlukileyo). Ngoku yi “Okwahlukileyo kuthelekiswa nogonyo” ugqatso lokulwa ubhubhane. (Qaphela: Ukwahluka okutsha kuyavela kweminye imimandla yehlabathi, kubandakanya i-US. Lixesha kuphela eliza kuxela ukuba eminye imimandla ingakugonya ngokukhawuleza kunokuba kuguqulwe okwahlukileyo.) I-"3rd Wave" yaseYurophu iya kuba ngumxholo wale veki.
Imarike ilindele ukukhutshwa kwemali
USihlalo we-Fed wase-US uPowell, phakathi kwamanye amalungu e-Fed, kulindeleke ukuba athethe ngoMvulo, ngoLwesibini nangoLwesithathu kule veki. Nangona kunjalo, iingxoxo ezi-2 zokuqala kunye ne-BIS zimalunga nezinto ezintsha kubudala bedijithali. Ubungqina kufanelekile ukububona ngoLwesithathu. UPowell uza kuthetha ne-US Senate Banking, ezeZindlu, kunye neKomiti yezeDolophu.
Ngelixa engenakulindeleka ukuba atshintshe indlela acinga ngayo, iiSenethi zisenokufuna ukucacisa ezinye zezimvo zakhe zakutshanje kumazinga enzala kunye nokunyuka kwamaxabiso. Kwanasemva kwentlanganiso ye-FOMC ngoLwesithathu, iimarike zebhondi zibonakala zibiza iPowell's bluff. Nangona kunjalo, wachaza ukuba i-Fed ifuna idatha eyiyo, hayi uqikelelo nje ngaphambi kokuba iqale ukwehla.
Ikhalenda yedatha yezoqoqosho kule veki nayo iyaqaqamba, njengoko idatha yokuphela kwenyanga kunye nokuqala kuka-Epreli ikhutshwa kwiveki ezayo. Nangona kunjalo, ngaphandle kukaPowell kunye nefandesi, kuninzi ngedatha yase-UK kule veki.
tags iYurophu, Indawo yeFed